Firaisam-be Afrikana – MyDago.com aime Madagascar
Tsy mbola leo antsika
Maro no nisaina sy nihevitra fa nataon’ny Firaisam-be Afrikana an-jorom-bala ny raharahan’i Madagasikara. Nisa aza moa no namatrapatratra mihitsy fa tsy misy korontana ahiana loatra eto ka tsy naharototra firy an’ireo tompo-marika teo anivon’ilay filan-kevi-pilaminana ny momba antsika.
Tratran’ny fanakianana mafy ny fanelanelanan’ny SADC sy ireo notendrena hitantana izany. Io no fototra tsy nahitàna izay tokony ho tohin’ny fanampahan-kevitra momba ny firenena Malagasy, fa tsy ny maha-maika na tsia ny raharaha. Tratran’ny andraso andraso mahariva andro ny famolavolantsika Gasy ny fifanarahana tokony nifankekentsika momba ny fanapahan-kevitra tao Sandon farany teo, satria nanaovan’ny mpanelanelana sy ny mpihazona ny fahefana “paipaika politika” indray ny tokony ho firosoana amin’izany.
Raha ny marimarina kokoa dia tokony ho taty amin’ireo mpifanandrina politika Gasy miisa 11, voatonontonona tao amin’ilay fanambaran’i Sandon, no nandrafitra ny rijan-teny rehetra hanatanterahana izay voasoratra tao. Saingy tsy izany moa no niseho fa tonga dia ny fitsingolohana ny voasoritry ny andininy iray tamin’izany no nahamaika antsika, ka lasa nijoro hanohitra izay voasoratra hatramin’ny miaramila izay tokony ho aroriaka farany ho amin’ny fanatanterahana azy. Nipoitra ny olana satria niverina any amin’ny fanohanana ny tondrozotra vita rangotra tamin’ny 9 martsa teny Ivato indray ny tohan-kevitra nataon’ny Dr SIMAO. Ary rehefa nahatsapa ny mety “hadisoany” ny filoha mozambikana taloha CHISSANO, dia nanitsy indray ny fijeriny ka nilaza ny fandikany ny momba ilay andininy iray mahabe resaka.
Ny filoham-pirenena tao amin’ny SADC, ny fivoriana nataon’ny filan-kevi-pilaminan’ny Firaisam-be Afrikana dia samy nahatsapa ankehitriny fa ilaina ny fandafetan’ny mpifanandrina Gasy ny rijan-teny rehetra ho fampiharana izay fehi-kevitr’i Sandton. Tsy vitantsika anefa io fa ny fanakanana ny “mpitsoa-ponenana sy ny sesin-tany” no zava-dehibe sy nifanasana vangy teto. Dia iza no manao tsinotsinona antsika amin’izany? Ny firaisam-be Afrikana sa isika tsy nahavita enti-mody?
Famahana ny krizy Gasy
Tonga hitsabo an’i Dago ny Dr Simao !
Auteur Ony RambeloPublié le 8 juillet 2011 8 juillet 2011 Catégories Malagasy, Politique
3 réflexions sur « Firaisam-be Afrikana »
Lekivy dit :
9 juillet 2011 à 5 h 24 min
Lalim-paka loatra ny lonilony sy fifanenjehana eo amin’ireo mpitarika politika eto amintsika ka samy tsy misy te hampandefitra ny ambom-pony. Izany no mahatonga antsika mandadilady any amin’ny SADC amin’izay dinika farany kely indrindra tokony atao ho famahana izao olana izao. Araka ny nolazain’ny Sobika.com hoe raha samy nampihatra ny fifanaraha tany MAPUTO ny rehetra efa nilamina hatrizay, fa misy ny mihevitra ny hahavita irery ka tsy te-hahalala ny mpifanandrina aminy.
Ny tena mampalahelo dia ny fanaovan’ny mpanao politika tsinontsinona ny tombontsoam-pirenena manoloana ny tombon-tsoany manokana, ka raha tokony fifanarahana sy fifamelana no atao dia toa vao mainka mihenjan-droa ny tady ankehitriny.
Ny tsy azo lavina koa dia misy mihitsy ny mahita tombon-tsoa amin’ny tsy fivahan’izao olana izao ka mametraka sakantsakana isak’izay manakaiky marimaritra iraisana.
Ny sisa vaha-olana dia ny fasahian’ny vahoaka hidina an-dalam-be hiantso ireo mapnao politika tsy vitan’ny hiverina hifampiresaka fa hifanaraka mihitsy ka omena fe-potoana ny hanaovana izany raha tsy izany dia hitarina eran’ny faritra ny fihetsiketsehana. Mialoha ny fotoam-pampianarana manaraka no tokony hanaovana izany hetsika lehibe izany ka tsy tokony hifidianana ankolafy.
Izany no tokony ataon’ny fiarahamonim-pirenena fa tsy fanohizana ny fanelanelanana eo amin’ny samy be-marenina.
9 juillet 2011 à 7 h 14 min
S’il le pouvait, Chissano aurait toujours été venu personnellement à Mada
Mais comme si ce n’est les armes, du moins de propos vociférants qui l’attendent de la part du régime en place, il a jugé bon d’envoyer ses subordonnés, qui ont suivi NON PAS les points décidés lors de Sandton et Gaberone
mais plutôt se laissant impressionner par les iVETA et RaMAMBA, pour ne pas dire des incapables se laissant facilement corrompre
A ce stade-ci, ma confiance repose sur l’Union Européenne et les USA…
Ny frantsay no namorona ny politika ary mpianatra ny gasy : 1- tsy ho hampianariny anao daholo ny fahaizany fa tsy maintsy ny hapahany ihany dia tsy maintsy TARA eo isika fa ataony sangodi-panina eo fotsiny fa ny tsy hainy dia ny SAKOROKA ihany , tsy misy hafa tsy io ihany fa aza mandany andro tompoko o , vahaolana 100% io !
Précédent Article précédent : Aoka isika hifantoka amin’ny seho sy tranga misy marina ka tsy hihinana aman’bolony
Suivant Article suivant : Kolonely Andrianasoavina Charles